Nwatakịrị 'Godzilla' na-abịa n'ike | Network Meteorology
El Niño bu ihe omuma banyere ihu igwe na-agbanwe usoro ngagharị nke oke osimiri. A na-eme ya kwa afọ 3 ma ọ bụ 7 ọ bụla, mana ekwenyere na n'ihi okpomoku ụwa, a ga-ahụwanye ya n'akụkụ ụwa niile.
Afọ ole na ole gara aga, na 1997, ọ bụ ihe na-agbawa obi. Agbanyeghị, NASA kwenyere na 2016 nwere ike buru ibu ma sie ike karị, ruo n'ókè ha kpọrọ ya "Godzilla."
1 Kedu ihe bụ El Niño na gịnị ka ọ gụnyere?
2 Akụkọ banyere El Niño
3 El Niño usoro nyocha
4 Kedu ka o si emetụta ihu igwe?
4.1 Gburugburu ụwa
4.3 Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia
5 Na Na Na Na Naa »
Kedu ihe bụ El Niño na gịnị ka ọ gụnyere?
Nke a onu metụtara okpomoku nke mmiri Pacific, nke na-ekpo ọkụ n'etiti 1 ruo 3ºC ma e jiri ya tụnyere nke nkịtị, kwa afọ 3 ma ọ bụ 7 ọ bụla. Nke a oscillating kpo oku na obi jụrụ ụkpụrụ a maara dị ka ENSO (ma ọ bụ ENSO) okirikiri. Ọ na-emetụta usoro mmiri ozuzo na mpaghara ebe okpomọkụ, mana ọ nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ihu igwe n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Ma El Niño (nke dị na okpomoku) na La Niña (nke metụtara mmiri jụrụ oyi) bụ oke akụkụ nke usoro ENSO, yana nke atọ a na-akpọ Neutral, n'oge a na-edekọ okpomọkụ nkịtị.
Akụkọ banyere El Niño
Aha ihe ịtụnanya El Niño (nke na-ezo aka na nwata Jesus), ndị ọkụ azụ Peruvian nyere ya Mmiri a na-ekpo ọkụ nke na-apụta kwa afọ n’oge ekeresimesi, si otú a kwado mbata nke ọtụtụ azụ. Ha lere ya anya dị ka onyinye Chineke, n’ihi ya, n’oge na-adịghị anya ha malitere ịmata mgbanwe a n’oké osimiri nke aha El Niño.
Kaosinadị, n’afọ ndị 60 ha malitere ịghọta na ọ bụghị ihe a na-eme n’obodo a na Peru, kama na ọ metụtara mpaghara ebe niile dị na Pasifik, ọbụnadị gafee. A maara ugbu a na ọ nwere ike imetụta ihu igwe nke ụwa dum n'oge dum ya. Oge dum nke ENSO dị n’agbata afọ 3 na 7, dị ka anyị kwuru. N'ime afọ ndị a, enwere usoro ọkụ na-adị n'etiti ọnwa 8 na 10 ọ bụla (El Niño), usoro nnọpụiche na enwere ike inwe oge oyi (La Niña). ENSO bụ mgbanwe na-agbanwe agbanwe nke ukwuu, ma ike ma ogologo oge. N'ezie, amabeghị nke ọma ihe kpatara mgbanwe ndị a.
El Niño usoro nyocha
El Niño na-ahụrụ site ụzọ dị iche iche, pụta ìhè na Satellites, sere n’elu mmiri buoys na oké osimiri analysis. Ndị na-eme nchọpụta na-enwetara data na ọnọdụ dị n'oké osimiri, yana ikuku dị na mpaghara ikuku.
Kedu ka o si emetụta ihu igwe?
Ozugbo emechara ya, mgbanwe dị egwu na ọnọdụ okpomọkụ na usoro mmiri ozuzo na-eme n'ọtụtụ akụkụ ụwa. Mgbanwe ndị a na-eme n'ihi na emetụta usoro ikuku na ikuku. N'ebe ndị a na-ekpo ọkụ, ikuku nke na-etolite ka ọ bụrụ urukpuru mmiri ozuzo n'otu ebe aghaghị ịgafe ebe ọzọ n'ihi ike ndọda. Na ụwa ndị ọzọ, mgbanwe ikuku nwekwara ike ịkpata ụkọ mmiri ozuzo n'akụkụ ụfọdụ, ma ọ bụ oké mmiri ozuzo na ndị ọzọ.
Iji mata ma ghọta ókè ọ nwere ike imetụta ọnọdụ ụwa, ka anyị hụ gịnị bụ nsonazụ ya:
Ihe ndekọ Nke okpomọkụ
Ọdịdị ọrịa ndị siri ike ikpochapụ
Ibelata nke umu anumanu na umu osisi
Mgbanwe na mgbasa ikuku
Oge ukwuu iru mmiri, emi edịm edepde etieti.
Kpo oku nke Humboldt Ugbu a.
Ibelata ikuku ikuku.
Oké ọkọchị importantes.
Oke okpomọkụ baja.
Obughi ígwé ojii.
Agbanyeghị, buru n'uche nke ahụ enweghị El Niño abụọ, na mgbanwe oge a nakwa oge ihu igwe dị iche nwere ike ịdị iche site na ikpe na otu. Yabụ, mgbe ọ malitere, enweghị ike ijide n'aka na mpaghara ndị emetụtara ga-abụ otu ihe ahụ n'oge ikpeazụ, a ga-enwe ihe ịga nke ọma karịa, mana ọ gaghị ekwenye na ha ga-abụ otu ọzọ.
Na Na Na Na Naa »
Ka ụwa na-ekpo ọkụ, na-eme ka ọdịdị nke ikuku na-esikwu ike karịas Ikpo ọkụ na-enwe mmetụta kpọmkwem na El Niño, yabụ enwere obi abụọ na ụfọdụ nwere oke ikwenye. Na Northern Hemisphere na 2016 okpomọkụ dị elu karịa na mbụ: na North Pole ha nwere 2ºC mgbe nkịtị bụ -26ºC. N'aka nke ọzọ, na Southern Hemisphere na kpọmkwem na Sonora (Mexico) snow dara maka oge mbụ na afọ 33. Na Latin America, oke mmiri ozuzo na nkeji nke mbụ nke afọ bụ ndị na-akwado akụkụ nke ụwa.
Na mgbakwunye na temometa, ndị ọkachamara ha lere anya n’elu elu Oke Osimiri Pasifik. Dịka ị si hụ na onyonyo a, ọnọdụ dị na 97 dịka ihe anyị nwere na ngwụcha afọ 2015.
Dabere na NASA, El Niño 2016 egosighi ihe ịrịba ama nke ịchọrọ ịgbasa. Ọtụtụ mgbe, a na-enwe mmetụta ya na Northern Hemisphere n’oge opupu ihe ubi, ma ha na-ebelata ka ọnwa na-agabiga. Ma na nke ugbu a nwere ike ọ dị iche.
A ga-enwe nsonaazụ ya na South America, mana "n'agbanyeghị ebe ị bi, ị ga-enwe mmetụta nke ihe ahụ," NASA kwuru.
N'iburu ihe omimi a, enwere ike ime obere. Ọ kachasị mma ịnwa ịmegharị ihe kachasị mma, ma na-a bea ntị na ịdọ aka na ntị ihu igwe iji zere nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ike dị egwu nke El Niño »Godzilla»